Onye na-emepụta igwe na-emepụta ihe na ndị na-ebunye ya - China Cutlọ Mgbu Igwe
Igwe Mgbuji Bridge
Igwe a na - eweputa sistemụ microcomputer na njikwa igwe mmadụ, jikọtara ya na ihe dị oke elu nke kachasi elu iji chọta na ngwaọrụ infrared, na - eji ntụgharị iji chịkwaa nri aka ekpe, na - edozi ọsọ ahụ dịka ihe okwute. Ọ na-eji haịdrọlik eweli usoro, combinat ...
Tiltable Bridge tingcha Machine
Igwe a na - eweputa sistemụ microcomputer na njikwa igwe mmadụ, jikọtara ya na ihe dị oke elu nke kachasi elu iji chọta na ngwaọrụ infrared, na - eji ntụgharị iji chịkwaa nri aka ekpe, na - edozi ọsọ ahụ dịka ihe okwute. Ọ na-eji haịdrọlik eweli usoro, elu lif ...
Middle ngọngọ akwa ọnwụ igwe
Ngọngọ tingcha Machine
Igwe a na - ejide usoro nchịkwa microcomputer na interface igwe mmadụ, na - eji inverter iji chịkwa nri nri aka ekpe, na - agba ọsọ ọsọ dịka ihe okwute. Ọ na-eji haịdrọlik n'ibuli usoro, Nchikota chrome-plated ndu pin na-eyi ndu ohia, na obere ọdịiche, wearable, b ...
Manual tingcha Machine
Igwe a na - eji ihe jikọrọ ya; isi isi nwere ike ibugharị ogo 180 ma bụrụ eletrik na-agbago na ala. Igwe ahụ dum nwere usoro dị mma, ọdịdị dị mma, ọrụ siri ike na nkenke nhazi dị elu, nke ruru eru maka ịkpụ na ịkpụcha obere slate, lath na taịl.